Miverina any amin'ny macOS High Sierra avy amin'ny macOS Mojave | Avy amin'ny mac aho
Miverena any amin'ny macOS High Sierra avy amin'ny macOS Mojave
Javier Porcar | | High Sierra macOS
Rehefa hamita iray volana amin'ny kinova farany an'ny macOS Mojave izahay, dia mahita mpampiasa manombana ny mety hisian'ny miverina amin'ny kinova taloha ny rafitra, ohatra, macOS High Sierra.
Ny antony mahatonga an'io fivadihana io dia mety ho maro. Matetika izy io dia misy ifandraisany amin'ny olana amin'ny kinova ankehitriny fampiharana izay ampiasainao miverimberina, na ho an'ny sasany olana amin'ny fifandraisana rehetra karazana fitaovana. peripherals izay mbola tsy namboarina tamin'ny kinova macOS farany teo na tsy misy antony mazava dia miverena amin'ny kinova High Sierra satria kinova matanjaka kokoa io.
Tsy sarotra ny miverina amin'ilay kinovan'ny macOS High Sierra teo aloha, saingy mitaky dingana sy fotoana maromaro ny fampidinana ilay rindrambaiko sy fametrahana azy. Noho izany dia tsy maintsy manatanteraka dingana samihafa isika.
Voalohany indrindra, paompy ampidino ny rindrambaiko macOS High Sierra. Tsy maintsy mandeha any amin'ny Mac App Store izahay. Raha mitady macOS High Sierra avy any Mojave ianao dia tsy hiseho izany. Izany dia satria i Apple dia tsy manome rafitra fiasa antitra noho ilay napetraka ankehitriny. Saingy hita izany, raha mankany amin'ny fividianana antsika isika, ao amin'ny Mac App Store. Tsindrio ny fampidinana, amin'ny ilany ankavanana.
Ity fampidinana ity dia hijanona ao amin'ny fisie fisie an'ny Mac. Mora ny mamantatra ny fisie, ny anarany dia Install macOS High Sierra. Amin'ity fisie ity dia azonao ampiasaina amin'ny: mamorona installer baoty macOS High Sierra, apetaho amin'ny a fampiharana virtualization avy amin'ny rafitra miasa toa ny Parallels.
Satria tsy rakitra azo ampiharina io dia tsy afaka mametraka azy fotsiny isika. Amin'ity tranga ity dia afaka miantehitra amin'ny a isika kinova taloha an'ny backup Machine Machine, izay nataontsika tamin'ny High Sierra napetraka. Ny safidy farany dia ny fitehirizana ilay rakitra izay nakarinay tamina kapila ivelany ary hanatanterahana a fametrahana madio. Ity safidy ity dia atolotra anao raha mila fotoana maharitra nefa tsy vita, izany hoe, kinova aorian'ny kinova, na mametraka sy mamafa ireo rindranasa maro izahay. Tokony ho tadidinao fa ny fametrahana madio dia manala ny atin'ny fitaovantsika rehetra, misafidy izay safidy mety indrindra hahasoa anao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Miverena any amin'ny macOS High Sierra avy amin'ny macOS Mojave
etn dia hoy izy:
Ny High Sierra na ny rafitra miasa teo aloha dia tsy hita ao amin'ny faritra mividy ao amin'ny mac store.
Mamaly an'i etn
Nanaitra ahy io tsy nampoizina io, rehefa avy nanandrana aho ary nahita fa manana bibikely marobe amin'ny rindrambaiko haino aman-jery Mojave, nanapa-kevitra ny hidina any High Sierra aho, izay miasa fahagagana taloha, ary ankehitriny tsy afaka misintona ny sary hanatanterahana fametrahana madio. Mampidina 22 Mb azo ampiharina fotsiny izy io ary manao fampidinana aoriana ary avy eo mametraka ao amin'ny Mojave, ary tsy izany no tadiaviko. Apple dia mihatra hatrany amin'ny fampiharana politika mitovy amin'ny "mpanao politika ara-panjakana" mamela ny mpampiasa mandoa ny karamany ...
Pedro Rodriguez dia hoy izy:
Aza mividy IMAC RETINA 21,5 santimetatra 4K 2017, tena miadana izy io fa ny zavatra ratsy indrindra dia TSY azo atao ny manao kopia backup fa ny karazana APFS dia amin'ny kapila mafy ivelany na inona na inona ary na ny Mac Capsule aza Manana Mac efa zokinjokiko miaraka amin'ny High Sierra napetraka aho ary miasa toa manintona raha oharina amin'ny Mojave, mazava ho azy raha manandrana manavao ny Catalina ianao ary tsy mivoaka hizaha ny zavatra ataonao, azafady fa nanao an'ity aho mividy
Mamaly an'i pedro rodriguez
Araka ny voalazan'i Jony Ive, ny Apple Watch dia tsy famantaranandro
Tena fantatrao ve izay azonao ampidirina ao amin'ny USB C an'ny Mac?